Qeybta 1: Waa maxay sababta dad badan oo ka beddelaan siday macruufka in Samsung
Qaybta 2. Mid ka mid ah click in ay beddelaan ka iPhone in telefoonada Samsung
Qaybta 3. Poll: Ma waxaad tahay user iPhone ama user Samsung ah?
Iyadoo ee dadka caadiga ah ay fududaato helitaanka technology dambeeyay, gaajo loo helo qalab dheeraad ah oo awood badan iyadoo ay sii kordhayaan si wayn. Tusaale ahaan gaar ah Mid ka mid ah waa kororka dhawaan in dhaqankan cusub ee wareegaayo ka macruufka hindiso Samsung. Dad badan oo dheeraad ah ayaa la baaraandegaya iPhone ay qalabka Samsung, waayadan dambe. Sababta? Waa hagaag, ma ahan oo keliya mid ka mid ah. Halkii, waxaa jira liiska oo dhan sababo uu sameeyey ee macruufka ugu daacadsan taageerayaasha tagtaan wanaagsan iyo in ay u gudbaan qalabka Samsung.
Marka runtii hoos yimaado waa in ay, dadka maalmahan doonayaa waxa ugu fiican ee lacagta ay baxdo. Laga soo bilaabo size screen in xal camera inay awood hardware ka ah, wax kasta oo uu si ba'an u eegeen. Tani waa inta badan, sababtoo ah Internet-ka ayaa la siiyaa xitaa dadka ugu laylis dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u go'aamiyaan qalabka waa run ahaantii ay lacag ku kacaya. Bal aan isku aadka is barbardhig deg deg ah inta u dhaxaysa labada inay si fiican u fahmaan, shaqada ee doorashada user.
Eryis in muuqaalada. Design jirka Same, oo la mid ah shaashadda xallinta Muuqaalada New la qalab kasta. Hagaajiyey ee la update kasta
No NFC NFC in xitaa unugyada hoos u jaban ah
Horumar No muhiim ah in pixels camera. Ugu danbeeyay iPhone 6 qoreysa kaliya 8 camera MP. Pixels camera More iyo ka badan oo la qalab kasta oo cusub. Ugu danbeeyay Samsung qod6 ku faantaa ah camera 16 Xildhibaan
Eryis ee size shaashadda. Ka hor inta 6 iPhone, oo dhan iPhone lagu soo muuqan screen 4 inch ah. iPhone 6 Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay 4.7 inches screen iyo iPhone 6 daray dambeeyay la Timaadda weyn 5.5 inches screen Samsung ayaa bixiya dadka isticmaala ay kala duwan tirada screen ka hore. Laga bilaabo S3 in ciyaaray ah 4.8 inches bandhigay, ka Samsung telefoonka ugu dambeeyay, qod6 leedahay screen 5.1 inches
Apple ayaa dhab ahaan gaabis ah oo la xiriira dhexgalkooda 3G iyo LTE ee qalabka ay Samsung ciyaaray 3G sano ka hor Apple sameeyey oo la mid ah ayaa si degdeg ah in la siiyo taageero LTE in qalabka ay
Haddii aad sidoo kale tahay mid ka mid ah dadka u wareegay oo ka iPhone in Android badan aad runtii waa wax badan oo dhan xog u baahan in la wareejiyo. Uma baahnid in aad ka walwasho, si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah Wondershare MobileTrans ka dhigaysa nidaamka mid aad u fudud. Waa software in kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka mid ah aalad si kale kharash ku click hal. Uma baahnid in aad in ay dhex maraan ku hawshooday oo dhan in gacanta lagu abuurista hayaan oo ag fadhiyey aad laptop ama computer waayo, maalintii oo dhan xulashada files shaqsi. MobileTrans Qaadataa daryeelka oo dhan in aad u.
Isagoo ka hadlay waxa Wondershare MobileTrans leeyahay in ay bixiyaan, aan aragno sida ay dhab ahaantii ka shaqeeya. Si aad u bilaabaan wareejinta xogta adiga oo isticmaalaya Wondershare MobileTrans, raac tallaabooyinkan fudud:
Download Wondershare MobileTrans kor ku xusan oo ku xidh si aad laptop ama computer. Habka loo xirxiro sida caadiga ah ma qaadan muddo dheer si ay u dhamaystiraan si aadan u badan tahay waxay noqon lahayd inaad wax badan sugaan.
Markii uu dhamaystay habka rakibo, ordo MobileTrans aad laptop / computer. Connect labada qalabka, ka iPhone oo mobile ah Samsung in aad laptop / computer via fiilooyinka USB aad.
Sidii hore loo tilmaamay, Wondershare MobileTrans sameeyaa ugu shaqada kuu ah, waxa kale oo aysan aad u baahan tahay in ay gacanta reserved qalabka aad. Sug Wondershare MobileTrans si loo ogaado qalab si toos ah. Dulqaad haddii initialization markii ugu horeysay qaadataa in yar sida barnaamijka loo baahan yahay si loo soo dajiyo darawallada loo baahan yahay qaarkood marka la isticmaalayo qalab markii ugu horeysay.
Ka dib markii la ogaado labada qalabka, aad arki doonaa shaashadda la mid ah kuwan soo socda. Waxaad dareemi doonaa labada qalabka ku lugta waxa ay muujinaysaa. Sidoo kale ogsoonoow badhanka "Flip" oo loo isticmaali karo in la beddelo Source iyo qalab Destination la click kaliya. Menu xarunta waxay muujinaysaa faylasha in ay tahay in la soo guuriyeen in qalab caga.
Dooro dhamaan xogta in aad rabto in lagu wareejiyo ka iPhone in aad Samsung adigoo sanduuqyada baahisey in fursadaha xogta la doonayo. Guji "Start Copy" mar aad samayn doorashada.
Bar horumarka A muuqan doona oo muujinaya horumarka horumarka dhameystirtay in boqolkiiba. Waxa kale oo la tilmaamaysa doonaa xaaladda suuqa xogta shakhsiga. Kuwii lahaa ayaa loo wareejiyay yeelan doontaa ah "Guusha" qoraal ah iyaga ka gees ah. Sug bar horumarka si ay u gaaraan 100%.
Marka habka wareejinta waa dhameystiran yahay, aad uga jari karo telefoonada aad ka laptop / computer si nabad ah oo bilaabin isticmaalka qalab cusub ee Samsung oo dhan xogta hore aad hore u wareejiyay, waxa uu.
Bal aynu eegno sida qaar badan oo idinka mid ah ayaa weli daacad u ah iPhone aad. Vote hoos ku qoran in ay doortaan qalabka hadda in aad isticmaalayso oo aan aragno oo ku guuleystay in dagaalka ah cell-telefoonada muuqan jarida technology ku laayeen!
Xulashada 1. iPhone
Xulashada 2. Samsung
Xulashada 3. Midkoodna
> Resource > macruufka > One Click inay beddelaan siday macruufka in Samsung